ဗီရာ နဲ႔ ပြဲဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ေအာင္လအန္ဆန္းကို ကမၻာေက်ာ္ သြားေစနိုင္တာလဲ? - CeleLove
October 12, 2019 Cele Love Up To Date News 0
မနက္ျဖန္ ညေနေရာက္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တစ္ေတြ အားလုံး ေစာင့္ေမၽွာ္ေနၾကတဲ့ One Championship ရဲ့ One Century ပြဲစဥ္ႀကီးဟာ ဂ်ပန္ နိုင္ငံမွာ စတင္က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီပြဲရဲ့ အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္ ထိုးသတ္မွာေတာ့ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ နဲ႔ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ႏွစ္ခုစလုံး ရဲ့ ခ်န္ပီယံ ၊ ျမန္မာ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ေအာင္လ အန္ဆန္း နဲ႔ ဟဲဗီးဝိတ္ ခ်န္ပီယံ ဖီလစ္ပိုင္ နိုင္ငံသား ဘရန္ဒန္ ဗီရာ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … ။
ဗီရာ နဲ႔ ေအာင္လ အန္ဆန္း တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ 2014 ခုႏွစ္မွာ One Championship နဲ႔ စတင္လက္တြဲခဲ့သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ၊ ေအာင္လ အန္ဆန္းက လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း 11 ပြဲအထိ ထိုးသတ္ထားကာ ၊ 10 ပြဲ နိုင္ ၊ 1 ပြဲ ရႈံး ရလာဒ္ ထြက္ေပၚထားခဲ့ပါတယ္။ ဗီရာကေတာ့4ပြဲသာ ထိုးသတ္ရေသးၿပီး ၊4ပြဲ စလုံးကို အနိုင္ရရွိထားခဲ့တာပါ။ပြဲမတိုင္မီ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ ဗီရာဟာ ဒီပြဲဟာ4ခ်ီအထိေတာင္ မေရာက္ပဲ အေျဖေပၚလိမ့္မယ္လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္သြားခဲ့ၿပီး ၊ သူ႔ရဲ့ လၽွင္ျမန္တဲ့ လက္သီးထိုးခ်က္ တြဲလုံးေတြ နဲ႔ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြက ေအာင္လဆီက လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ ခ်န္ပီယံ ေရႊခါးပတ္ကို လုယူဖို႔ အဓိက က်လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္ … ။
ဗီရာဟာ အေမရိကား နဲ႔ ဥေရာပ ပရိသတ္ေတြ သိထားတဲ့ ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၊ ဒီပြဲ ကေန တဆင့္ ေအာင္လ အန္ဆန္း ကလဲ သူ႔ရဲ့ နာမည္ကို တစ္ကမၻာလုံးက သိရွိသြားဖို႔ ေမၽွာ္လင့္လၽွက္ ရွိေနပါတယ္။တကယ္တမ္းမွာလဲ ဗီရာ နဲ႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲဟာ ေအာင္လ အတြက္ တစ္ခ်က္ခုတ္ၿပီး ၊ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္ရွသြားနိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားစြာရွိေနတာမို႔ ၊ ဒီပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ သူရဲေကာင္းႀကီး ရဲ့ ဘက္ကေန အျပည့္အ၀ ဝန္းရံလိုက္ၾကရေအာင္ပါ … း။
One Century ပြဲစဥ္ဟာ ကမၻာ့ MMA ေလာက ရဲ့ အႀကီးက်ယ္ဆုံး နဲ႔ အခမ္းနားဆုံး ပြဲျဖစ္ၿပီး ၊ UFC လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကေတာင္ က်င္းပ နိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြ ၊ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုတည္းမွာပဲ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖူးတဲ့ ဖိုက္တာေပါင္း 28 ေယာက္ အထိ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ၾကမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ လုပြဲကလဲ7ပြဲ အထိ ပါဝင္လၽွက္ ရွိေနပါတယ္။ဒါဟာ အရမ္းကို ထူးျခားလြန္းတဲ့ အခ်က္ၿပီး ၊ လက္ရွိ MMA ရဲ့ အျမင့္ဆုံး ၿပိဳင္ပြဲလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ UFC ေတာင္ ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုမွ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပြဲကို တစ္ပြဲသာ ထည့္သြင္း က်င္းပေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္ … ။
ဒီထက္ ထူးျခားတာက One Century ပြဲစဥ္ဟာ အခမ္းနားဆုံး ၿပိဳင္ပြဲ ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔ အညီ ၊ အေမရိကားမွာလဲ B/R Live ကေန ပထမဆုံး အႀကိမ္ ျပသသြားမွာ ျဖစ္သလို ၊ ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးမွာ တိုက္ရိုတ္ထုတ္လႊင့္ျပသမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြ အရ ဒီၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို တိုက္ရိုတ္ၾကည့္ရႈၾကမယ့္ ပရိသတ္ေပါင္း သန္း 70 အထိ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၊ ျမန္မာ နဲ႔ ဖီလစ္ပိုင္ တို႔က ပရိသတ္ေတြ အမ်ားဆုံး ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ One Championship ဟာ UFC လို ပိုက္ဆံေပးမွာ သူ႔ရဲ့ပြဲစဥ္ေတြကို ၾကည့္ရႈခြင့္ ရမယ္ ဆိုတဲ့ မူဝါဒမ်ိဳးကို တရားေသ စြဲကိုင္ထားျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ၊ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပြဲ အဓိက ပြဲစဥ္ေတြကို အခမဲ့ ႐ုပ္/သံ လိုင္းေတြကေန နိုင္ငံတိုင္းစီမွာ ထုတ္လြင့္ျပသခြင့္ ေပးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က ပရိသတ္ေတြဟာ မနက္ပိုင္းမွာ MNTV နဲ႔ ညေနပိုင္းမွာ MRTV Entertainment လိုင္းေတြကေန အခမဲ့ ၾကည့္ရႈခြင့္ ရရွိသြားမွာပါ … ။
အဲဒီလို အခ်က္လက္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေအာင္လ အန္ဆန္း နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲစဥ္ဟာ တစ္ကမၻာလုံးက ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈၾကမွာ ျဖစ္လို ၊ ဒီပြဲမွာသာ ရလာဒ္ေကာင္းခဲ့ရင္ ေအာင္လ အန္ဆန္းဟာ ကမၻာေက်ာ္ ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာနိုင္သလို ၊ ျမန္မာျပည္ ရဲ့ ပုံရိပ္ကိုလဲ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ျမင့္တင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လဲ One Championship ရဲ့ တည္ေထာင္သူ ခ်တ္ထရီ က “ One Century ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ က်ေနာ္ အႀကိဳက္ဆုံး ပြဲက2ပြဲ ရွိပါတယ္။ တစ္ပြဲက အိန္ဂ်လီနာ တို႔ ရဲ့ ပြဲျဖစ္ၿပီး ၊ ေနာက္တစ္ပြဲ ကေတာ့ ေအာင္လ အန္ဆန္း နဲ႔ ဗီရာ တို႔ရဲ့ ပြဲစဥ္ပါ။ဒီေနရာမွာ ေအာင္လန္ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ပြဲဟာ ပိုက္ဆံေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေက်ာ္ေဇာမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ႀကိဳၿပီး ရွင္းလင္း ထားပါရေစ။သူတို႔ အတြက္လဲ ေငြေၾကး က အဓိက မဟုတ္ပါဘူး … ။
ဒီဖိုက္တာ ႏွစ္ေယာက္ဟာ MMA သမိုင္းမွာ ဂႏၲဝင္တြင္ေစမယ့္ အခိုက္အတန္႔ေတြကို ဖန္တီးဖို႔ အခုလို ပြဲျဖစ္လာခဲ့တာပါ” လို႔ မွတ္ခ်က္ ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ဒီတစ္ႀကိမ္ ေအာင္လ အန္ဆန္းသာ အနိုင္ရသြားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူဟာ လက္ရွိ အာရွတိုက္ တစ္ခုလုံးရဲ့ အခမ္းနားဆုံး MMA ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္လို႔ ဝိုင္းဝန္း သတ္မွတ္ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္သလို ၊ ကခ်င္ျပည္ကေန ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ အဖိုးတန္ ရတနာ တစ္ပါးလို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚၾကရေတာ့မွာပါ။ အေကာင္းဆုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ နဲ႔ အတူ ဆာမူရိုင္းတို႔ ရဲ့ေျမမွာ ျမန္မာ့ အလံကို လႊင့္ထူခဲ့ပါ ကိုႀကီးေအာင္လေရ……….
ဗီရာ နဲ့ ပွဲဟာ ဘာဖြစ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကို ကမ္ဘာကျော် သွားစေနိုင်တာလဲ?
မနက်ဖြန် ညနေရောက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ တစ်တွေ အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ One Championship ရဲ့ One Century ပွဲစဉ်ကြီးဟာ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲရဲ့ အဓိက ပွဲစဉ်အဖြစ် ထိုးသတ်မှာတော့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် နဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း နှစ်ခုစလုံး ရဲ့ ချန်ပီယံ ၊ မြန်မာ့ သူရဲကောင်းကြီး အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဘရန်ဒန် ဗီရာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
ဗီရာ နဲ့ အောင်လ အန်ဆန်း တို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ 2014 ခုနှစ်မှာ One Championship နဲ့ စတင်လက်တွဲခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ အောင်လ အန်ဆန်းက လက်ရှိ အချိန်ထိ စုစုပေါင်း 11 ပွဲအထိ ထိုးသတ်ထားကာ ၊ 10 ပွဲ နိုင် ၊ 1 ပွဲ ရှုံး ရလာဒ် ထွက်ပေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဗီရာကတော့4ပွဲသာ ထိုးသတ်ရသေးပြီး ၊4ပွဲ စလုံးကို အနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါ။ပွဲမတိုင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ဗီရာဟာ ဒီပွဲဟာ4ချီအထိတောင် မရောက်ပဲ အဖြေပေါ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်း ထုတ်သွားခဲ့ပြီး ၊ သူ့ရဲ့ လျှင်မြန်တဲ့ လက်သီးထိုးချက် တွဲလုံးတွေ နဲ့ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကန်ချက်တွေက အောင်လဆီက လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ရွှေခါးပတ်ကို လုယူဖို့ အဓိက ကျလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် … ။
ဗီရာဟာ အမေရိကား နဲ့ ဥရောပ ပရိသတ်တွေ သိထားတဲ့ ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဒီပွဲ ကနေ တဆင့် အောင်လ အန်ဆန်း ကလဲ သူ့ရဲ့ နာမည်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိရှိသွားဖို့ မျှော်လင့်လျှက် ရှိနေပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာလဲ ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲဟာ အောင်လ အတွက် တစ်ချက်ခုတ်ပြီး ၊ အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ်ရှသွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ များစွာရှိနေတာမို့ ၊ ဒီပွဲမှာ ကျနော်တို့ သူရဲကောင်းကြီး ရဲ့ ဘက်ကနေ အပြည့်အဝ ဝန်းရံလိုက်ကြရအောင်ပါ … း။
One Century ပွဲစဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့ MMA လောက ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး နဲ့ အခမ်းနားဆုံး ပွဲဖြစ်ပြီး ၊ UFC လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးကတောင် ကျင်းပ နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ၊ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲ တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ ဖိုက်တာပေါင်း 28 ယောက် အထိ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ လုပွဲကလဲ7ပွဲ အထိ ပါဝင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ အရမ်းကို ထူးခြားလွန်းတဲ့ အချက်ပြီး ၊ လက်ရှိ MMA ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲလို့ ပြောလို့ရတဲ့ UFC တောင် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုမှ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲကို တစ်ပွဲသာ ထည့်သွင်း ကျင်းပလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် … ။
ဒီထက် ထူးခြားတာက One Century ပွဲစဉ်ဟာ အခမ်းနားဆုံး ပြိုင်ပွဲ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ အညီ ၊ အမေရိကားမှာလဲ B/R Live ကနေ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြသသွားမှာ ဖြစ်သလို ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ တိုက်ရိုတ်ထုတ်လွှင့်ပြသမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။ကြိုတင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေ အရ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို တိုက်ရိုတ်ကြည့်ရှုကြမယ့် ပရိသတ်ပေါင်း သန်း 70 အထိ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ၊ မြန်မာ နဲ့ ဖီလစ်ပိုင် တို့က ပရိသတ်တွေ အများဆုံး ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် One Championship ဟာ UFC လို ပိုက်ဆံပေးမှာ သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုခွင့် ရမယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒမျိုးကို တရားသေ စွဲကိုင်ထားခြင်း မရှိတာကြောင့် ၊ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲ အဓိက ပွဲစဉ်တွေကို အခမဲ့ ရုပ်/သံ လိုင်းတွေကနေ နိုင်ငံတိုင်းစီမှာ ထုတ်လွင့်ပြသခွင့် ပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေဟာ မနက်ပိုင်းမှာ MNTV နဲ့ ညနေပိုင်းမှာ MRTV Entertainment လိုင်းတွေကနေ အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာပါ … ။
အဲဒီလို အချက်လက်တွေကြောင့်ပဲ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲစဉ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုကြမှာ ဖြစ်လို ၊ ဒီပွဲမှာသာ ရလာဒ်ကောင်းခဲ့ရင် အောင်လ အန်ဆန်းဟာ ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်သလို ၊ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလဲ တစ်နည်းတစ်ဖုံ မြင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ One Championship ရဲ့ တည်ထောင်သူ ချတ်ထရီ က “ One Century ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ပွဲက2ပွဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ပွဲက အိန်ဂျလီနာ တို့ ရဲ့ ပွဲဖြစ်ပြီး ၊ နောက်တစ်ပွဲ ကတော့ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ပါ။ဒီနေရာမှာ အောင်လန် နဲ့ ဗီရာ တို့ပွဲဟာ ပိုက်ဆံကြောင့် သော်လည်းကောင်း ၊ ကျော်ဇောမှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြိုပြီး ရှင်းလင်း ထားပါရစေ။သူတို့ အတွက်လဲ ငွေကြေး က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး … ။
ဒီဖိုက်တာ နှစ်ယောက်ဟာ MMA သမိုင်းမှာ ဂန္တဝင်တွင်စေမယ့် အခိုက်အတန့်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အခုလို ပွဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ” လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ် အောင်လ အန်ဆန်းသာ အနိုင်ရသွားမယ် ဆိုရင်တော့ သူဟာ လက်ရှိ အာရှတိုက် တစ်ခုလုံးရဲ့ အခမ်းနားဆုံး MMA ဖိုက်တာ တစ်ယောက်လို့ ဝိုင်းဝန်း သတ်မှတ်ပေးရတော့မှာ ဖြစ်သလို ၊ ကချင်ပြည်ကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ထပ် အဖိုးတန် ရတနာ တစ်ပါးလို့ ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ကြရတော့မှာပါ။ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေ နဲ့ အတူ ဆာမူရိုင်းတို့ ရဲ့မြေမှာ မြန်မာ့ အလံကို လွှင့်ထူခဲ့ပါ ကိုကြီးအောင်လရေ……….